A ekpere nke ekele maka ngọzi nke ndụ
Paolo Tescione	Edere ya November 18, 2020 November 18, 2020
Ever na etetala kwa ụtụtụ na nsogbu ndị ọzọ? Dị ka ha na-eche gị ka ị meghee anya gị, ha nwere ike ịdọrọ uche gị niile na mbido ụbọchị gị? Nsogbu riri anyị ọnụ. Na-ezu ike anyị. Ma n’ime usoro nke idozi ọtụtụ okwu anyị bịara, anyị nwere ike anyị agaghị ama mmetụta ha nwere n’omume anyị.
Ilekwasị anya ná nsogbu nke ndụ pụrụ iduga n’inwe obi nkoropụ, nkụda mmụọ, ma ọ bụ ọbụna obi nkoropụ. Otu ụzọ iji hụ na nsogbu anaghị ekpuchi ngọzi ndị dị na ndụ anyị bụ inye ekele. Idozi nsogbu ọ bụla ọzọ na-eme ka m nwee obere ndepụta nke ekele. Ma enwere m ike ịchọta ihe iji dejupụta ndepụta ahụ, ọbụlagodi mgbe ndụ m jupụtara na nsogbu.
“… Ikele ọnọdụ niile; n'ihi na nke a bụ uche Chineke n'ime Kraịst Jizọs maka unu. " 1Te 5:18 ỌN
Anyị maara okwu ochie: "Guo ngọzi gị". Ọ bụ ihe ọtụtụ n’ime anyị mụtara n’oge anyị ka dị obere. Agbanyeghị, ugboro ole ka anyị na-akwụsị ma kpọsaa ihe ndị anyị nwere ekele maka ha? Karịsịa n'ụwa nke oge a, ebe mkpesa na esemokwu ghọrọ ụzọ ndụ?
Paul nyere ụka na Tesalonaịka nduzi iji nyere ha aka ibi ndụ bara ụba ma na-amị mkpụrụ n'ọnọdụ ọ bụla ha zutere. Ọ gbara ha ume ka ha “kelee Chineke n’ọnọdụ niile…” (1 Ndị Tesalonaịka 5:18 ESV) Ee, ọnwụnwa na nsogbu ga-adị, ma Pọl mụtara ike ikele. Ọ maara eziokwu a dị oké ọnụ ahịa. N'ime oge kachasị njọ nke ndụ, anyị ka nwere ike ịchọpụta udo na olile-anya nke Kraịst site n'ịgụ ngọzi anyị.
Ọ dị mfe ikwe ka echiche banyere ihe niile mejọrọ kpuchie ọtụtụ ihe na-eme nke ọma. Mana o were obere oge ịchọta ihe anyị nwere ekele maka, agbanyeghị na ọ nwere ike iyi obere. Obere nkwụsị iji kelee Chineke maka otu ihe ahụ n'etiti nsogbu nwere ike ịgbanwe echiche anyị site na nkụda mmụọ wee nwee olile anya. Ka anyi bido n’ekpere nke ekele a maka ngozi nke ndu.
Ezigbo Nna nke Eluigwe,
Daalụ maka ngọzi na ndụ m. M na-ekwupụtara na akwụsịghị m ikele gị maka ọtụtụ ụzọ ị siri gọzie m. Kama, m na-ekwe ka nsogbu bịara m. Gbaghara m, Onye-nwe-ayi. Deservekwesiri ikele niile m nwere ike inye na ọtụtụ ndị ọzọ.
Kwa ụbọchị, ọ na-ewetara m ọtụtụ nsogbu, ka m na-elekwasịkwu ha anya, a na-enwekwu nkụda mmụọ. Okwu gị na-akụziri m uru ekele. N’Abụ Ọma 50:23, ị na-ekwupụta, sị: “Onye na-enye ekele dị ka àjà ya na-enye m otuto; M'g showme ka nzọputa Chineke puta ìhè nye ndi ziri ezi n'uzọ-ha. “Nyere m aka icheta nkwa a dị ịtụnanya ma mee ka ekele bụrụ ihe kacha mkpa ná ndụ m.
Ibido ụbọchị ọ bụla iji kelee gị maka ngọzi nke ndụ ga-eme ka omume m dị ọhụrụ banyere nsogbu na-ada. Obi ekele bụ ihe dị ike nke na-egbochi nkụda mmụọ na obi nkoropụ. Mee m ike, Dinwenụ, iji gbochie ihe ndọpụ uche ma lekwasị anya n'ịdị mma gị. Daalụ maka onyinye kasịnụ, nwa gị Jizọs Kraịst.
N’aha ya, Amen
Nke gara aga Post Gara aga post:Onye odeakụkọ Katọlik Katọlik nọ na mba ọzọ: ndị kwere ekwe China chọrọ enyemaka!
Next Post → Post ozo:Pope Francis: Meri na-akuziri anyi ka anyi jiri obi anyi na-emeghe ka ekpe ekpere